Iyo SharePlay ficha inodzokera kuIOS nekuburitswa kweiyo iOS 15.1 uye iPadOS 15.1 betas | IPhone nhau
SharePlay inodzoka kuIOS nekuburitswa kweIOS 15.1 uye iPadOS 15.1 betas
Nguva pfupi yapfuura kuvhura vhezheni yekupedzisira yeIOS 15 uye iPadOS 15, pamusoro peTVOS 15 uye watchOS 8, iyo Cupertino-based kambani yakaparura beta yekutanga yeIOS 15 uye iPadOS 15, beta yekutanga inoratidza kudzoka kwebasa SharePlay mushure mekutsakatika mune yekupedzisira betas pamberi peiyo yekupedzisira vhezheni.
Apple yakawedzera chiitiko ichi nekusunungurwa kweIOS 15 Beta 2 munaJune. Nekudaro, muna Nyamavhuvhu yakaibvisa ikazivisa kuti kuita kutsva uku, zvaisazowanikwa nekuburitswa kweshanduro yekupedzisira yeIOS 15, kunge mamwe mabasa anga achiwira munzira (chimwe chinhu chakajairika mumakore achangopfuura).
Sezvo isu tichigona kuverenga pane iyo Apple yekuvandudza peji:
SharePlay yakagoneswazve muIOS 15.1, iPadOS 15.1, uye tvOS 15.1 betas, uye iyo SharePlay Developer Printa haichadiwe. Kuti uenderere mberi nekukudziridza SharePlay rutsigiro mune ako macOS kunyorera, simudzira kune macOS Monterey beta 7 uye isa iyi nyowani yekuvandudza nhoroondo.
Apple yakazivisa chinhu chitsva ichi seimwe yeakanyanya maficha eIOS 15 uye iPadOS 15 kuWWDC 2021 muna Chikumi apfuura. Iyi ficha inobvumira vashandisi ku tarisa mafirimu nemitambo yeTV uchienderana kuburikidza neFaceTime, shanda pamwe neApple Music playlists, govana zvako zvikwangwani, nezvimwe.
Kuti Apple yaisanganisira mashandiro aya zvakare hazvireve kuti ichazoburitswa neinotevera iOS yekuvandudza, sezvo zvingangoita kuti inotevera betas ichaidzima zvakare. Tichafanirwa kumirira shanduko yeiyo betas kuti tione kuti riini basa nyowani richaburitswa, netariro nekukurumidza munguva pfupi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iOS » iOS 15 » SharePlay inodzoka kuIOS nekuburitswa kweIOS 15.1 uye iPadOS 15.1 betas
Izvi ndizvo zvinhu zvakaratidzwa mukati meiyo iPhone 13
Iwo akanakisa manomano uye mashandiro eIOS 15